”Qof axmaq ah unbaa lacag iskaga khasaariya Luiz Adriano” – Dimitri Seluk – Gool FM
”Qof axmaq ah unbaa lacag iskaga khasaariya Luiz Adriano” – Dimitri Seluk
(Milano) 22 Dis 2016 – Dimitri Seluk, oo ah wakiilka Yaya Toure, ayaa sheegay “in axmaq uun” uu iibsan lahaa Luiz Adriano oo ka tirsan AC Milan kaasoo haatan lala xiriirinayo Spartak Moscow, kaddib markii la sheegay in macallin Massimo Carrera uu doonayo laacibkan bisha Jannaayo.
“Ma qabo in iib sidan nacasnimo u ihi uu dhici karo, haddiise ay dhacdo waxay caddayn u tahay in qof kasta oo go’aankaa qaataa uu ama axmaq yahay ama uu musuq yahay,” ayuu Seluk u sheegay webka Russian-ka ah ee Championat.com.
“Laacibkan muddo dheer ayaan aqaanney, maaddaama uu kulan-bilowgiisii Shakhtar Donetsk uu ka horjeedey Metalurg. La yaabse malaha inuu €8m kaga soo tegey, jeer ay Shakhtar caadiyan laacibiinta ku fasaxdo €40m.
“Muuqaalka qura ee uu leeyahay Luiz Adriano waa tillaabo, maaddaama ay Spartak jeceshahay kubad haysina, ma aha inay lacag iskaga khasaariso saxiixiisa,” ayuu raaciyay.
“Ku dhowaad sanad ka hor waxaa loo bandhigay China, balse xitaa qorshahaasi wuu fashilmay. Maxay Spartak malaayiin uga bixinaysaa laacib isaga dhami fasalkan ciyaaray 120 daqiiqo oo aan hal gool dhalin midna dhigin?” ayuu is waydiiyay.
Inter Milan oo guul wayn ka gaartay naadiga Lazio, xilli labo gool uu dhaliyey Mauro Icardi… + SAWIRRO